Shiinaha LSM Vertical qoyan Warshad Mill iyo saarayaasha | Qiangdi
LSM isku darka mashiinka ayaa nuugaya astaamaha aaladaha qalabka wax lagu shiido, ciideynta, shiida daarta iyo wixii la mid ah. Waxay leedahay faa'iidooyinka waxtarka sare, buuqa hooseeya, awoodda wax-qabad ee ballaaran iyo hawlgalka ku habboon iyo dayactirka.
1 .LSM isku darka mashiinka ayaa nuugaya astaamaha qalabka wax shiida, sanding, mashiinka shiida iyo wixii la mid ah. Waxay leedahay faa'iidooyinka waxtarka sare, buuqa hooseeya, awoodda wax-qabad ee ballaaran iyo hawlgalka ku habboon iyo dayactirka.
2.marka cabirka feedku yahay 325 mesh, kadib laba jeer oo shiidi kara wuxuu gaari karaa wax ka badan -2 Nm m95% (celcelis ahaan cabirka walxaha ee 0.6 μm hoose).
3.waxaad kari kartaa shiidika, laakiin sidoo kale waxaad heleysaa saxarka xaalada socodka.
4. qashin qashin qashin qubka caarada ah iyadoo la isticmaalayo walxaha u adkeysiga u adkeysta iyo walxaha adag ee isku dhafan ee u adkeysiga badan, qalabka, nolosha muddada dheer.
5. Isticmaalka duugista warbaahinta duugga, saamiga cabbirka walxaha sayniska, habka wax shiidi kara, ma laha wasakhda birta, ma saamaynayso caddaanta sheyga.
6. isticmaal mashiinka shiidan ee qoyan waxay noqon kartaa hawl joogto ah, kana madaxbanaan wax shiida wax soo saar, ama waxaa lagu celin karaa wareegga quudinta si loo dhameystiro laba ama in ka badan alaabta shiidaya.
Jaantuska socodka socodka
Nidaamyada soo socda ayaa loogu talagalay tixraac oo kaliya waxaana loo qaabeyn karaa iyada oo loo eegayo macaamilka macaamiisha iyo shuruudaha kartida.
(1) Mid ka mid ah la dejiyey shaashadda Ball qoyan
(2) Laba nooc oo taxane taxane ah
(3) Laba nooc oo isbarbar socda
Hore: Qeybaha Jet Mil
Xiga: Nidaamka WP-WDG – U Codso Goobta Cilmiga Beeraha